Si aad ku shaqeeyaan kombiyuutarada, waxa loo baahan yahay qaar ka mid ah software nidaamka loo baahan yahay loo yaqaan Operating System. In foomka gaaban waxaa loo yaqaan OS. Wixii desktop, nidaamyada hawlgalka Laptop & server yihiin Windows, Mac OS X iyo Linux. Sidaas awgeed waxa la mid ah sida telefoonka oo kiniin ah. Tusaalooyin ugu muhiimsan oo ku saabsan nidaamka qalliinka waa Android, Apple macruufka, Windows Phone 7, Blackberry OS, HP / Palm Web OS iwm
Operating System sidoo kale u baahan yahay in la sameeyo functional alaabta oo dhan elektarooniga cusub sida Digital Talafishino, Foornada maykrowayfku. Shuban OS ah (Operating System) iyo waxa maamula in ay hab gaar ah oo ka mid ah tallaabooyinka cayn lagu qeexaa iyo in na loo yaqaan ROM.
Qaybta 1. Waa maxay ROM Android? Qaybta 2. Waa maxay Android firmware? Qaybta 3. Sida loo ROM ee kaabta ee Android Qaybta 4. kaabta Android firmware / Stock ROM in PC
Qaybta 1. Waa maxay Android ROM?
Farsamo ahaan, ROM waa istaagaan Read Memory oo keliya. Waxay muujinaysaa xasuusta gudaha ama lagu kaydin jiray oo qalab ah in kaydka edbinta nidaamka qalliinka. Inta uu hawlgalka socday fudud, oo waa inuusan marna u baahan yahay beddelka kasta. Taasi waa sababtoo ah dhammaan tilmaamaha lagu kaydiyaa Read file Memory oo keliya.
Waa shaqo aan rewritable on CD ama DVD in qofna waxay bedeli kartaa. Haddii beddeleen, ka dibna qalab dhaqmo sida cillad.
Waxaa duwan drives Hard disk, drives adke iyo drives gobolka joogto ah ama qalab flash kaydinta joogtada ah in ay helaan meel lagu kaydiyo u soo kordhiyo faylasha nidaamka qalliinka loo marayo kumbiyuutarrada shakhsi ahaaneed oo ay u ogolaadaan Akhri / qortaa buuxa.
Qaybta 2. Waa maxay Android firmware?
ROM The (Akhri Memory oo keliya) qalliinka nidaamka ah in aan uga wada hadalnay waxaa sidoo kale loo yaqaan firmware. Iyada oo qalabka, waxay ku heli karaan in dadka isticmaala oo aan nooc kasta oo ah wax ka bedelidii oo ay joogaan adag. Sidaas darteed, waxaa loo yaqaan firmware.
* Waxaa suurtagal ah in wax laga beddelo firmware ah, laakiin ma ka yar yahay isticmaalka fudud.
* Qalabka qaarkood waxay isticmaalaan sida set kaydinta sida akhriyaan oo kaliya iyada oo loo marayo ilaalinta software iyo qalabka qaar ka mid ah loo isticmaalo qalabka khaaska ah.
* Read oo keliya ilaalinta software ka saari kara ama overwrite aan wax caawimaad ah ee hardware gaar ah.
* Waxaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo kaliya software qoraalka ujeeddada iyo inta badan waxa uu u baahan yahay ma la xidhiidha computer ah.
Sidaas, Operating System iyo firmware labada waa wax la mid ah oo kuwan isticmaali kartaa wax kasta oo ka mid ah qalabka sida.
Qaybta 3. Sida loo ROM ee kaabta ee Android
1. Root qalab Android iyo website ClockWorkMod Recovery.
2. Ka hor bilaabo, waxaad u baahan tahay si aad u hubiso in taageero qalab ama ha la eego liiska telefoonada gacanta.
3. Tag Google Play iyo raadin Manager ROM.
4. waxaa rakib.
5. Maamulaha Run ROM.
6. Dooro "Flash ClockWorkMod Recovery" doorasho.
7. Raac jirtey ayaa ka dooro "ROM hadda kaabta".
8. Marka ee kaabta dhameystirtay, reboot qalab Android aad.
9. Hadda waxaad u baahan tahay in ay tani soo celiyo. Fur codsiga mar kale iyo dooro "Maamul iyo Soo Celinta kaabta" ka dibna loo soo celiyo.
10. Waxaad heli doontaa OS cusub marka aad reboot qalabka.
Taasi tutorila ku saabsan sida loo raad raac Android ROM.
Qaybta 4. kaabta Android firmware / Stock ROM in PC
Waxaad sameyn kartaa in stock gurmad ROM ku saabsan qalabka Android la Kies iyo badbaadin ROM hadda qalabka Android aad.
Ka hor inta gurmad aad u baahan tahay laba waxyaabood:
1. Kies codsiga desktop . (Rakibnay in computer)
2. firmware software A. (Version Updated)
Hadda waa inaad raacdaa tallaabooyinka:
1. Browse Windows Explorer (computer), awood u fayl ku maqan, files iyo drives.
2. Isku qalabka Android inay computer. Markaas, waxaa loo aqoonsan doonaa by Kies iyo Kies soo bixi doonaa oo dhan files of firmware dhawaan.
3. Dhammaan files degsado ku shuban doonaa ******* tmp. meel gaarka (* = qaar ka mid ah waraaqaha iyo lambarada) magacaabay file ee buugga ku meel gaar of your computer.
4. orod Open iyo meel gaarka nooc oo guji Okay. File ku-meelgaarka ah ayaa soo bixi doona daaqad cusub.
5. Buuxinta duuban ee Kies, ay helaan sharikadaha ku meel gaarka *******. Leh magaca folder ah, zip kordhin folder uu furmo suuqa ku meel gaar ah files in aad hore u furay.
6. Waxaa loola jeedaa hagaajinta firmware bilaabmaa Kies.
7. Ka dib waxa ay joogaan, nuqul ka dhan files ee qalabka Android ka hor ku dhameysteen firmware casriyayn ah, haddii kale faylka tegi doonaa.
Sidaas, tani waa sida aad u dhawaadaan si ay u helaan guusha.
Top 8 Manager Contact Android Waxaad u
Top 10 Manager SMS Android Waayo, waxaad
Wax walba oo ku saabsan Manager Device Android
Tababare All Apps on Your Android Effortlessly
Xogta laga Nokia dhaqaaq Android
Dhaqaaq Xiriirada in an New Android Phone
Maamul All Photos on Android Phone
Wax walba oo ku saabsan Lugood U
> Resource > Android > Waa maxay Rom / firmware iyo Sida loo kaabta Rom Android / firmware